NewTek TriCaster® Mini Video Production System သည် UHD ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ထုတ်လွှင့်ခြင်း NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အသားပေး » NewTek TriCaster® Mini Video Production System သည် UHD ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ထုတ်လွှင့်ခြင်းတို့ကိုထောက်ပံ့သည်
NewTek TriCaster® Mini Video Production System သည် UHD ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ထုတ်လွှင့်ခြင်းတို့ကိုထောက်ပံ့သည်
1985 ကတည်းက NewTek, Inc တစ် ဦး အဖြစ်စိုးစံခဲ့သည် အိုင်ပီနည်းပညာနည်းပညာသည်လူအများအားကွန်ယက်ပုံစံရုပ်မြင်သံကြားအကြောင်းအရာများဖန်တီးရန်နှင့်အခြားကမ္ဘာ့အခြားဒေသများသို့မျှဝေရန်နည်းလမ်းများကိုတက်ကြွစွာပြောင်းလဲခဲ့သည်။ The San Antonio, Texas ပြည်နယ်အခြေစိုက်ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်ဆော့ဝဲလ်ကုမ္ပဏီများသည် live နှင့် post-production ဗီဒီယို tools များနှင့်အမြင်အာရုံပုံရိပ် software များထုတ်လုပ်ရန်ကူညီခဲ့သည်။
အသုံးပြုသူများသည်တိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုများကိုတက်ကြွစွာဖမ်းယူထုတ်လွှင့်နိုင်သည့်မည်သည့်နေရာတွင်မဆို၊ NewTek သုံးစွဲသူများအား၎င်းတို့၏ပရိသတ်များ၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုယခင်ကထက်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာတိုးတက်စေရန်ထိရောက်သောနည်းလမ်းများဖြင့်ထောက်ပံ့ပေးသည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီ၏နောက်ဆုံးပေါ်ဖြည့်စွက် TriCaster ထုတ်ကုန်လိုင်း ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများအနေဖြင့်သူတို့၏ software- သတ်မှတ်ထားသောပုံရိပ်ပြောပြခြင်းကိုအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းအားဖြင့်ပိုမိုကြီးမားသော၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သော၊ ပိုမိုတောက်ပသောပုံပြင်များကိုပြောပြရန်သူတို့၏ရည်မှန်းချက်ထက်ကျော်လွန်သွားမည်မှာသေချာသည်။
New Tek ရဲ့မျိုးဆက်သစ် TriCaster® Mini ကမ္ဘာ့အပြည့်စုံဆုံးနှင့်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောဗီဒီယိုထုတ်လုပ်မှုစနစ်ဖြစ်သည်။ TriCaster Mini ၏ plug-and-play setup သည်ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်သူအသစ်များကိုလျှင်မြန်စွာစတင်ရန်နှင့်ယနေ့ခေတ်ဖန်သားပြင်များအားလုံးကိုဖြန့်ချိရန်အတွက် 4K အထိဆုံးဖြတ်ချက်များဖြင့် ပိုမို၍ ပိုမိုရှုပ်ထွေးသောပရိုဂရမ်များကိုဖန်တီးရန်အလွယ်တကူသွားနိုင်သည်။ The TriCaster® Mini သေးငယ်ပြီးပေါ့ပါးသည့်စနစ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဇာတ်ကြောင်းပြောသူများအား၎င်းကိုမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုယူရန်၊ တည်ဆောက်ရန်နှင့်မိနစ်ပိုင်းအတွင်းစတင်ရန်ခွင့်ပြုသည့်စနစ်ဖြစ်သည်။ TriCaster® Mini သည်ရာနှင့်ချီသောမူလအဆင့်နှင့်အဆင့်မြင့်ထုတ်လုပ်မှုကိရိယာများကိုပေးသည်။
built-in ကို virtual အစုံ
R&D ၏ဥက္ကaccording္ဌ၏အဆိုအရ၎င်းနှင့်အခြားအင်္ဂါရပ်များသည်ဤမယုံနိုင်စရာဗီဒီယိုထုတ်လုပ်မှုစနစ်တွင်ပါဝင်သည် Vizrt Group မှ, (၏မိဘအမှတ်တံဆိပ် NewTek နှင့်NDI®) ဒေါက်တာအင်ဒရူးလက်ဝါးကပ်တိုင်, “ လူတိုင်းမှာအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ပြောပြနိုင်တဲ့ဗွီဒီယိုတွေရှိတယ်၊ ဗွီဒီယိုဟာမင်းရဲ့သတင်းကိုထုတ်လွှင့်နိုင်တဲ့အစွမ်းထက်ဆုံးနည်းလမ်းပဲ။ အဲဒါကြောင့်ငါတို့ဖန်တီးရတာကိုပျော်ဖို့ကောင်းပြီးစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ကြိုးစားတယ်” ဟုသူကပြောသည်။ TriCaster Mini သည်သင်ကျောင်းသားဖြစ်စေ၊ ကော်ပိုရေးရှင်းဆက်သွယ်ရေးမန်နေဂျာဖြစ်စေ၊ အတွေ့အကြုံရှိဗီဒီယိုကျွမ်းကျင်သူဖြစ်စေ၊ သင်နှစ်သက်သောဆိုရှယ်မီဒီယာအားလုံးသို့ထုတ်လွှင့်နိုင်သည့်အရည်အသွေးပြသနိုင်သည့်အရာများရှိသည်။
အပိုဆောင်း TriCaster® Mini Features
TriCaster Mini တွင် 8 ပြင်ပဗွီဒီယိုထည့်သွင်းမှုများရှိပြီး 4K UHD အထိဆုံးဖြတ်ချက်များတွင်သဟဇာတဖြစ်သောမည်သည့်အရင်းအမြစ်ကိုမဆိုထောက်ပံ့ရန်အလုပ်လုပ်သည်။ ၎င်းသည်ဇာတ်လမ်းပြောသူများကို၎င်း၏အတန်းမှအခြားစက်များထက်အခြားရွေးချယ်စရာများ၊ ထောင့်များ၊ အမြင်များပိုများစေသည်။ TriCaster Mini တွင် Ethernet ကေဘယ်လ်ကြိုးဖြင့်အလွယ်တကူချိတ်ဆက်နိုင်သည့် video, audio, tally, power နှင့် control တို့ကို power-over-Ethernet (PoE) ဖြင့် plug-and-play NDI ဆက်သွယ်မှု (၄) ခုပါရှိသည်။ ဤလုပ်ဆောင်မှုသည်သုံးစွဲသူများအားအချိန်၊ ငွေနှင့်အားထုတ်မှုကိုသက်သာစေသည်။ အသုံးပြုသူရှိပြီးသားနှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပေးသော PoE (power-over-Ethernet) ပါ ၀ င်သည့် modules နှစ်ခုပါဝင်သည် HDMI ကိရိယာများ။ ၎င်းသည်သူတို့ကို NDI နှင့်သဟဇာတဖြစ်သောရင်းမြစ်များသို့ချက်ချင်းအဆင့်မြှင့်လိမ့်မည်။
TriCaster Mini အတွက်သီးသန့်မိုဘိုင်း app တစ်ခုဖြစ်သည် NDI | HX ကင်မရာ.
ဒီမိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းကို Apple စတိုးကနေဒေါင်းလုပ်လုပ်လို့ရပါတယ်။ The NDI | HX ကင်မရာ Wi-Fi မှတဆင့် NDI အရင်းအမြစ်အဖြစ်ထုတ်လွှင့ ်၍ ကွန်ယက်ရှိ TriCaster Mini စနစ်များနှင့်ဆက်သွယ်သော iOS စက်မှဗီဒီယို၊ 4K UHD အထိခွင့်ပြုသည်။ ၎င်းသည်အသုံးပြုသူများအနေဖြင့်၎င်းတို့၏အဖွဲ့၏အိုင်ဖုန်းများမှရိုက်ချက်များကိုလွယ်လွယ်ကူကူဆွဲယူနိုင်စေသည်။ စျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုကိုဆွေးနွေးသည့်အခါ NewTek TriCaster Mini $ 8,995 US MSRP မှစတင်မည့်အစီအစဉ်များနှင့်အတူယခုလအတွင်းရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။ နိုင်ငံတကာစျေးနှုန်းများကွဲပြားလိမ့်မည်
NewTek ရဲ့ အဓိကအတွေးအခေါ်သည်ဤသို့သောအရာဖြစ်သည်။ဆော့ဖ်ဝဲလ်ဖြင့်သတ်မှတ်ထားသောအမြင်အာရုံဆိုင်ရာဇာတ်လမ်းပြောပြခြင်း (#SDVS) သည်လူအများတို့အားပိုမိုသောပုံပြင်များ၊ ပိုမိုကြီးမားသော၊ တောက်ပသော၊ ပိုမိုရဲရင့်စွာပြောဆိုနိုင်စေရန်ကမ္ဘာ့အပြည့်စုံဆုံးကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောဗီဒီယိုထုတ်လုပ်မှုစနစ်ကိုမောင်းနှင်သည်။ တည်ထောင်သူများစိတ်ထဲမှပေါ်ထွက်လာသည့်အမြင့်ဆုံးသောတီထွင်ဖန်တီးမှုကိုသာမြင့်တက်ရန်ရည်မှန်းသောအခါကြွေးကြော်သံအတော်လေး Tim Jenison နှင့် ရှင်ပေါလု Montgomery.
NewTek ပုဂ္ဂလိကပိုင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည် Vizrt။ ၎င်းသည်တက္ကဆက်ပြည်နယ်၊ ဆန်အန်တိုနီယိုတွင်အခြေစိုက်သည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီအမှတ်တံဆိပ်၏သူတို့အားပူးပေါင်းမည် Vizrt နှင့် NDI ၏ထီးအမှတ်တံဆိပ်အောက်မှာ Vizrt အုပ်စု။ အဆိုပါ NewTek ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်သည် 100% သည် ၄ ​​င်း၏ရုပ်မြင်သံကြားမိတ်ဖက်များအားစျေးကွက်သို့ပို့ဆောင်ရန်ဖြစ်သည်။
ဖြစ်သော CBS ရေဒီယို
ကာဒစ်ဖ် Metropolitan University မှ
စျေး Waterhouse Coopers
၎င်းနှင့် US Fortune 80 ၏ 100% ကျော်သည် New Tek ၏ဖောက်သည်များဖြစ်သည်။
အကြောင်းပိုသိချင်တယ်ဆိုရင် Newtek TriCaster Mini အသစ်နှင့်စစ်ဆေးပါ www.newtek.com
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ CES2017 ဒေါက်တာအင်ဒရူးလက်ဝါးကပ်တိုင် FOR-တစ်ဦးက ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor အိုင်ပီဗီဒီယိုနည်းပညာ MStar NDI NDI | HX ကင်မရာ NewTek SJGolden - SoftAtHome လှံ & Arrows TriCaster Mini ကို TriCaster ထုတ်ကုန်လိုင်း တီဗီနည်းပညာ က Ultra HD ဖိုရမ် မူကွဲစနစ်များ ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် Vizrt Vizrt အုပ်စု 2019-11-07
ယခင်: Blackmagic RAW အမျိုးအစားကို Indie Science Fiction Thriller, Portals များတွင်အသုံးပြုသည်
နောက်တစ်ခု: Periscope Post နှင့် Audio Edwin Polanco အားအင်ဂျင်နီယာချုပ်အဖြစ်ခန့်အပ်သည်